More Caliber Settings | Linux Addicts
More Caliber Settings
Diego ChiGerman Gonzalez | 01/05/2022 13:39 | General, Zvirongwa, Free Software
Caliber inotibvumira kugadzirisa akasiyana mafomati ekubuda
Isu tiri kuongorora nzira dzakasiyana dzekushandisa uye kugadzirisa kwe Caliber, iyo yakavhurwa sosi e-bhuku rekuunganidza maneja. Tiri kuita izvi nekuti, sezvakangoitawo mamwe mapurojekiti mazhinji, bhuku rekushandisa harina kukwana uye harina kurongeka.
Inguva yedu yekupa mhinduro pane dzimwe sarudzo mbiri dzekugadzirisa uye isu toenderera mberi neshanduko paramita. Senguva dzose, zvinongedzo kune zvakapfuura zvinyorwa zviri pazasi pepositi.
Sarudzo mbiri dzekupedzisira dzakasiirwa kwatiri ndezvekugadzirisa maturusi nemamenu, uye kuseta maitiro ekutsvaga.a. Muchiitiko chekutanga isu tinofanirwa kusarudza bharari kana kudonhedza menyu uye kuronga zvinhu nekuwedzera kana kubvisa, zvinoenderana nezvatinoda.
1.1 Dashboard overview
1.2 Matemu akaiswa mumapoka
1.3 mabhuku akafanana
2 Shanduko parameters
2.2 Common parameters kupinza uye kubuda
3 Nyaya Dzapfuura
Kutsvaga kugadzirisa kunoitwa mumapaneli matatu;
Muchikamu chino, nekutarisa kana kusatarisisa mabhokisi anoenderana, tinogona kuona kuti:
Mibairo yekutsvagisa inoratidzwa patinonyora.
Sarudza kana mibairo yekutsvaga yakajekeswa mune yakajairika rondedzero kana chete mazita anosangana nemaitiro ekutsvaga anoratidzwa.
Ratidza switch yekusarudza pakati pezvisarudzo zveiyo yapfuura poindi pasina kuisa iyo yekumisikidza.
Siyanisa pakati pemashoko akatsinhirwa neasina kusimbiswa.
Ronga kuti ndeupi rudzi rwemetadata yekutsvaga nekusingaperi.
Matemu akaiswa mumapoka
Mazwi ekutsvagisa akaiswa mumapoka mazita ekutsvaga anokutendera kuti uzvitsvage wega kupfuura imwe column. Semuyenzaniso, kana tikagadzira mapurisa akaiswa muboka izwi rekutsvaga rine value series, #black, #classic, ipapo mapurisa ekutsvaga:poirot achatsvaga "poirot" mune chero akatevedzana, #black, uye #classic columns.
Kugadzira izwi rekutsvaga rakaungana isu tinofanirwa kuisa zita rezita mubhokisi rekudonhedza pasi uyezve rondedzero yemakoramu ekutsvaga mubhokisi rekukoshar. Kuti upedze, tinya bhatani Chengetedza.
Zita rezita rekutsvaga rakaiswa mumapoka nderemavara madiki
Tinogona kushandisa otomatiki mushandisi zvikamu kuona zviri nyore zvinhu zvese zviri mumakoramu ari muboka rekutsvaga izwi. Uchishandisa muenzaniso wemapurisa uri pamusoro, iyo inogadzirwa otomatiki patron chikamu ichange iine ese akateedzana anoonekwa mumapurisa, #vatema, uye #classic. Neizvi tinogona kutarisa zvakapetwa, tsvaga kuti ndeipi koramu ine chimwe chinhu kana kutomisa dhairekitori yezvikamu (mapoka ane mamwe mapoka).
Zvatinotarisa papanera rino zvinoudza Caliber kuti angaziva sei kuti rimwe bhuku rakafanana nerimwe kana tichitsvaga.
Pano tinosarudza Maitiro eCaliber paanoshandura mabhuku pakati pemafomati.
Pano tinotsanangura sarudzo dzemafomati akasiyana tichishandisa yekudonha menyu:
Comic book processing: Isu tinosarudza kana kugadzirisa kunobvumirwa, kana mifananidzo inogona kuchinjwa kuva dema uye chena, ingani mavara anogona kushandiswa, kana zviyero zvakachengetwa, kutungamira kunoshandurwa kana mifananidzo yakasvibiswa.
FB2: Pano sarudzo chete ndeyekusarudza kana kusaisa indekisi pakutanga kwebhuku.
PDF: Isu tinoratidza kana kusafuratira mifananidzo.
RTF: Zvimwe chete nemifananidzo muWindows format.
TXT: Tinogona kuita kuti Caliber iedze kuziva chimiro chemavara, kuchengetedza nzvimbo, kubvisa indentation, uye kududzira Markdown notation.
DOCX: Isu tinosarudza kana tofunga imwe yemifananidzo iri mugwaro sepeji yekuvharira, kana kuwedzera peji rekuvhara mushure mekupedzisira kwega, uye kudzivirira indexes uye zvinyorwa kubva pakukanganisa mutsara wemitsara.
Common parameters kupinza uye kubuda
Tinobata nyaya iyi mu a Nyaya yapfuura
Izvi zvinotevera zvinogona kusarudzwa:
Kupatsanura kana kusapatsanura pamapeji.
Govera kana kusavhara.
Isa tafura yezviri mukati uye ipa iyo musoro.
Enzanisa nzira yekukamura kuita mapeji
Sarudza iyo EPUB vhezheni
Kuti tishandure kuMicrosoft Word format tinosarudza.
Wedzera kana kusaisa index.
Isa kana kusavhara uye kana tichizviita kana tikachengeta zviyero.
Muchinyorwa chinotevera tinoenderera mberi nekugadziriswa kwemafomati ekubuda
Kugadzirisa e-mabhuku neCaliber. Kunakirwa kwekushandisa mahara software
Zvakawanda nezve kubata mabhuku neCaliber
Kushandura pakati pemafomati ebook uchishandisa Caliber
Zvimwe pamusoro pekushandura pakati pemafomati ebhuku neCaliber
Kutora mabhuku uye zvinyorwa zvenhau neCaliber
Kushanda nemaraibhurari, madhisiki uye zvishandiso muCaliber
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » More Caliber Settings
Mr Musk Hausi kuda kutenga iyo Linux Foundation here?